traintips Archives | Page 4 of 5 | Save A tareenka
Waxaa jira dareen ma la midbaa Ruux seexan on tareen si tartiib ah u dhaqaaqin iyo tooso subaxdii dambe meesha aad u socoto, Diintooda daqiiqo ka dhaadhacyadii. In Europe, Waxaan nahay boobsiyo xulasho markii aan raadineyno meelaha ugu wanaagsan ee 'Ski Resorts' oo tareenka lagu booqdo. It’s not…
Samee ugu xilli qabow adigoo booqanaya ku Feestooyinka Best Winter in Europe. ciidaha ayaa ku lug wax walba oo ka barafka iyo snowboarding si music, Majaajilo, farshaxan baraf, iyo maraan damaashaad sitaa. Hoos waxaa ku qoran waa top 5 roundup of what you’ll find happening across Europe…
Badan ka sahlan baabuur oo dheeraad ah oo raaxo badan bas, qaadashada tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in ay la kulmaan ah Wadooyinka Tareenka Best for baraf Winter in Europe. dib u fadhiiso, nasato iyo buuraha cajiib ah u bogi, webiyaasha, iyo harooyinka halka en wadada u…
Backpacking waa mid ka mid ah siyaabaha ugu xiiso leh in ay u safraan, iyo sabab wanaagsan. Xorriyadda qabo alaabtaada oo dhan aad dhabarka iyo bootimaalaysiga ka tareen si ay u tababaraan iyo dal ilaa dal waa waayo-aragnimo cajiib ah. Tan iyo markii this waxa uu noqday sidaas oo caan ah, anaga…
oo kaliya dhowr saacadood gudahood, aad la sahaminta kartaa dadkii badnaa ka mid ah dalalka cusub oo dhalaalaya iyo sparkly. laakiin, waxa sida ugu fiican oo ay halkaas ka heli. Tabobaro oo ay kasoo horjeeddo Bus Yurub markii u safraya? This article was written to educate about Train Travel and was made…
Qoysaska kids, Fuushan la kids on tareen noqon kartaa hab xiiso leh oo la awoodi karo labadaba ah in ay u safraan. Waxa kale oo laga yaabaa in ugu raaxo leh oo ugu yaraan walaac marka aad la dhoofayso carruurta. Waxaan ognahay Tegay kids waxaa arrinta ma dhib waxa…
Weligaa ma doonayay in ay booqdaan Europe wax guridda, sida tareenka? Sidee ayey ka dhawaajiyaan in ay u safraan ilaa 300 kiiloomitir saacaddiiba? Europe ayaa network weyn ee tareenada-xawaaraha sare ee in si deg deg ah idiin qaadan doonaa si aad u socoto. adeegyada tareenka High-xawaaraha kaliya…